All news - Serasera Malagasy
Ireo tolotry ny serasera
Bizna - Antso filazana
Karajia - Resaka mivantana
5. Tohany ny teny malagasy
Hatramin'ny nanombohana ny Serasera Malagasy tamin'ny taona 3 oktobra 1999 dia noraisina ho safidy ny hanandratana ny teny malagasy eto amin'ity takelaka ity sy izay rehetra tantanan'ny serasera.org.… More>>
4. Asasoa Namana Serasera Dago teny Manankavaly
Teny Manankavaly indray ny Namana Serasera Dago, niaraka tamin'ny fikambanana Tetezana Onlus avy any Italia, no nampivelatra ny asa sosialiny. Toa izao ny sary fa ny tatitra mbola ho avy... niaraka tamin'ny… More>>
3. Koranan'ny Namana Serasera Dago teny Vontovorona
Nafana ihany koa ny fihaonan'ny Namana Serasera Dago NSD teny Vontovorona tamin'ny 25 oktobra 2008 teo. Toa izao ny fitantaran'i Angotiko azy: Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra fa nomeny andro… More>>
2. Serasera: Loko Vaovao, Hevitra Vaovao
Dia miova loko kely indray ny serasera manomboka amin'ity loha-taona 2008 ity. Na dia mbola vitsy aza ny vaovao dia atombotomboka eo aloha.. samy manoratra More>>
1. Fihaonana Serasera Tao Roma
Tontosa soa amantsara ny fihaonan'ny namana serasera natao tao Roma tamin'ny 14-18 aogositra lasa teo. Fanindroany izao no nisy fihaonana toa izao teto Roma. Ny voalohany dia tamin'ny taona 2006 izay… More>>
Concept and Design © 1999 - 2019 Serasera.org: Eugene Hery
Voasokatra tao anatin'ny 0.1524 segondra